Steve Harvey na -akpọ enyi nwanyị ụmụ nwanyị Michael B. Jordan Ezigbo Nwoke - Pop Omenala
Steve Harvey na nwa nwanyị Loris enyi nwoke Michael B. Jordan: Enweghị m ike ịhụ ihe ọjọọ ọ bụla na ya
N'atụghị anya, Steve Harvey enweghị ike ịhụ ihe ọjọọ na nwa ya nwanyị Lori Harveys enyi nwoke Michael B. Jordan.
N'oge mkparịta ụka Monday na Ihe ngosi Ellen DeGeneres , DeGeneres jụrụ ndị ahụ Esemokwu ezinụlọ nabata mmetụta ya gbasara nwa ya nwanyị nke ọdụdụ, Lori dị afọ 24, na mmekọrịta ya na onye na-eme ihe nkiri Michael B. Jordan, 34. Di na nwunye ahụ, nke mbụ hụrụ ọnụ ọnụ laa azụ na Nọvemba, mere mmekọrịta mmekọrịta Instagram ha na mbido Jenụwarị, mgbe ha abụọ na -ekerịta foto n'akụkụ ibe ha.
Michael B. Jordan zitere m ozi wee jụọ mụ na Portia [de Rossi] ka m nyere ya aka iju ya anya maka ụbọchị ọmụmụ ya ka ọ nweta ịnyịnya ka ha na -agba, DeGeneres kwuru.
N'ezie, Harvey masịrị ya Kwere kpakpando.
kedu oge ụlọ ebe a na -eyi akwa na -emechi
Agbalịrị m ka ọ ghara ịdị ka ya, ọ zara m. Agbalịrị m ịchọta ihe na -adịghị mma na ya nke m nwere ike igwu ma banye… maka na m kpochapụrụ ha niile. Ha niile. Ụfọdụ n'ime ha kpọbatara m n'ọnụ ụzọ azụ wee nọrọ ogologo oge karịa ka m chọrọ. Mana nwoke a, bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ otu n'ime ụmụ nwoke mara mma. Ive zutere nna ya. Ive nọdụ ala na ya, anyị kwurịtara okwu ọtụtụ awa. Enweghị m ike ịhụ ihe ọjọọ ọ bụla na ya.
Nke a abụghị oge mbụ Harvey kwuru maka mmekọrịta ụmụ ya nwanyị n'ihu ọha. N’ọnwa gara aga, Harveya pụtara Jimmy Kimmel Ndụ ma na -achị ọchị banyere ọnọdụ nwoke nwoke kacha nwee mmekọahụ na Jordans, na -agbakwunye na ọ bụ nwoke na -enwe mmekọahụ na ndụ. Ọbụna mgbe ahụ, ọ kwadoro mmekọrịta ahụ, na -akpọ Jọdan nnukwu mmadụ.
Ọ dị mma, nke mbụ, mee ka ihe doo anya: ọ bụ ezigbo mmadụ, ee, mana ọ bụ ọbụghị nwoke kacha nwee mmekọahụ I, ọ bụla, Harvey kwuru.
kedu oge netflix na -ewepụta ọdịnaya ọhụrụ
kedu ka m ga -esi nweta nwunye m threesome
ego ole ka ndị nwụrụ anwụ na -eje ije na -eme
ogologo oge ị ga -eti ohere nwụrụ anwụ 3